လက်ကား Lithium Pallet Jack, Lithium Electric Pallet Truck | Staxx
Hand Pallet Trucks များ၊
Manual နှင့် Semi-electric Stackers
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R&d အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်ရေး အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
Staxx လီသီယမ် Pallet Truck ကားအားသာချက်များ:
1 ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လီသီယမ် pallet jack ကိုအရောင်းအသင်းရှိ
3 ကျနော်တို့က Professional ကစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကရှိတယ်
4 ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R ကိုရှိ&: D အသင်း
5 ကျနော်တို့က Professional ကထုတ်လုပ်လီသီယမ် pallet ထရပ်ကားအသင်းရှိ
Staxx အဖွဲ့ဿုံဖောက်သည်များ၏စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၌ငွေရတတ်သောအတွေ့အကြုံ, ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစဖောက်သည်များအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ပါသည်။
Staxx လီသီယမ် pallet jack ကိုဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏စွမ်းရည်ရှိသည်။
အဆိုပါလီသီယမ် pallet jack ကိုဈေးကွက်ထဲမှာအဆုံးသုံးစွဲသူများ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နားလည်နိုင်သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများနှင့်စစ်ဆေးကမ်းလှမ်းမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်လီသီယမ်လျှပ်စစ် pallet ထရပ်ကားအရည်အသွေးကိုအာမခံချက်။
client နှင့် Staxx လီသီယမ် pallet ထရပ်ကားအကြားမိတ်ဖက်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
lithium PALLET Truck ထုတ်ကုန်များ
လီသီယမ် pallet jack, လီသီယမ်လျှပ်စစ် pallet ထရပ်ကားများကို
အကောင်းဆုံး LIGHT DUTY ELECTRIC STRADDLE LEG STACKER စျေးနှုန်းကောင်း - Staxx
အကောင်းဆုံး တရုတ်တွေအဖြစ်လျှပ်စစ် stacker ထုတ်လုပ်သူ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှပ်စစ် STRADDLE LEG STACKER စျေးနှုန်း စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အရည်အသွေး၊ Staxx အကောင်းဆုံး အလင်းသုံးလျှပ်စစ် ကြိုးကွင်း LEG STACKER စက်ရုံစျေးနှုန်း - Staxx၊ ဖောက်သည်များနှင့် Staxx အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ စိတ်ကြိုက် WS SERIES LIGHT DUTY လျှပ်စစ် STACKER ထုတ်လုပ်သူ
Staxx စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော WS SERIES LIGHT DUTY ELECTRIC STACKER ထုတ်လုပ်သူများ တရုတ်နိုင်ငံမှ၊ လျှပ်စစ်ဂိုဒေါင်ထရပ်ကားများ၏ အဓိကနည်းပညာမှာ မော်တာ/ဂီယာ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ဘက်ထရီတို့အပါအဝင် ပါဝါယူနစ်ဖြစ်သည်။ Staxx သည် အမှီအခိုကင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ တီထွင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး 48V brushless drive နည်းပညာကို တီထွင်ရာတွင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤနည်းပညာကို TÜV Rheinland မှ စမ်းသပ်ပြီး တစ်ခုတည်းသော စမ်းသပ်မှုဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ELECTRIC STACKER စျေးနှုန်း Staxx မှ သီးခြားထုတ်လုပ်ထားခြင်းသည် တတ်နိုင်သော၊ လက်ကားနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့် လက်လီလက်ကား pantograph လက်လှမ်းမီသော stacker - Staxx
Staxx လက်လီလက်ကား pantograph စျေးနှုန်းကောင်းမွန်သော stacker ရောက်ရှိ - Staxx၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရှိသည်။Pantograph Reach Stacker က အဆင်ပြေပါတယ်။နှင့် မြင့်မားသော လုံခြုံသော လျှပ်စစ်ပန်တိုဂရပ်ရောက်ရှိမှု1500 ကီလိုဂရမ် တင်နိုင်သော စွမ်းရည်ရှိသော stacker၊ lifterအမြင့်6မီတာအထိ၊ တင်းကျပ်သောအလုပ်ဧရိယာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်။
Smart Function Li-ion Battery Electric Pallet Truckနှင
ကျစ်လျစ်သော ကိုယ်ထည်၊ လက်တွန်းထရပ်ကားများကို အသုံးပြုသည့် တင်းကျပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်၊ အစိတ်အပိုင်းအများစုကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် လက်တွန်းထရပ်ကားနှင့် ဆင်တူသည်။◆ကိုယ်ထည်အပေါ်ငါးနှစ်အာမခံ◆ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားရန်6စက္ကန့်လိုအပ်သည်။◆ အလေးချိန် 1500/1800kgs ဖြင့် အဆင့်လိုက်ခံနိုင်မှု- 6%◆ ဘရိတ်ဖြင့်၊ ယာဉ်သည် ကုန်းစောင်း၊ ထရပ်ကားအမြီး သို့မဟုတ် ပလက်ဖောင်းပေါ်၌ မည်သည့်နေရာ၊ အချိန်မရွေး ရပ်တန့်နိုင်သည်။◆ ညာဘက်သို့ မောင်းနှင်ခြင်း။EPT15/18H အပြည့်အဝ ထိရောက်မှုရှိပြီး အားစိုက်ထုတ်စရာ မလိုသော မော်တာဖြင့် စျေးကွက်တွင် လက်တွန်းထရပ်ကားနှင့် ပေါ့ပါးသော လျှပ်စစ်ကုန်တင်ကားကို အစားထိုးရန် စံပြနှင့် ဘတ်ဂျက်တတ်နိုင်သော မော်ဒယ်လ် EPT15/18H အပြည့်အဝ လျှပ်စစ် pallet ထရပ်ကား။ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံ၊ နည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့ကို အခြေခံ၍ STAXX သည် ပြီးပြည့်စုံသော ပေးသွင်းသည့်စနစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် 500 ကျော်ဖြင့် တစ်နေရာတည်းတွင် သိုလှောင်ရုံသုံးပစ္စည်းပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
အမေရိကန်အကြောင်း - Staxx pallet ထရပ်ကားပရိုဖိုင်းကို
Professional ကလီသီယမ် pallet ထရပ်ကားဂိုဒေါင်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ
2012 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Staxx လီသီယမ် pallet ထရပ်ကားကိုတရားဝင်ထိုကဲ့သို့သောလီသီယမ် pallet jack, လီသီယမ် pallet ထရပ်ကား, လီသီယမ်လျှပ်စစ် pallet ထရပ်ကားအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဂိုဒေါင်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြန့်ဝေ၏ကဏ္ဍဝင်ကြ၏။ 2016 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီသစ်ကိုအမှတ်တံဆိပ် "Staxx" မှတ်ပုံတင်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောစက်ရုံ, ထုတ်ကုန်, နည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပေါ် အခြေခံ. Staxx ပြည့်စုံကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမှုစနစ်ကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်, 500 ကျော်ကုန်သည်တွေအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအတူတစ်မှတ်တိုင်ထောက်ပံ့ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
STAXX lithium PALLET ထရပ်ကားကုမ္ပဏီပုဂ္ဂိုလ်များ
လိမ္မော်ရောင် CUSTOM Solutions
lithium PALLET ဂျက်ရဲ့ Manufacturing
HIGH efficiency& အရည်အသွေးမြင့်မားသော
တရုတ်နိုင်ငံတွင် လက်တွန်းထရပ်ကားဘီးများ ထုတ်လုပ်သည့် Staxx
Staxx လက် pallet ထရပ်ကားဘီးထုတ်လုပ်မှုသည် မြင့်မားသောစံနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနိယာမကို အမြဲလိုက်နာခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများအသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုများပြားသည်။
STAXX PALLET ထရပ်ကား ဟိုက်ဒရောလစ် lifting စနစ် ကြာရှည်ခံမှု စမ်းသပ်မှု
STAXX PALLET ထရပ်ကား ဟိုက်ဒရောလစ် lifting စနစ် တာရှည်ခံမှုကို စမ်းသပ်ပါ၊ ဗီဒီယိုကို စစ်ဆေးပြီး နောက်ထပ် လေ့လာကြပါစို့။
PALLET Truck ယာဉ် ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု ပလပ်ဖောင်း
STAXX PALLET Truck ယာဉ်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု ပလပ်ဖောင်းကို ကြည့်ရန် ဤနေရာကို ကြည့်ပါ။
့သင်ထမ်းဆောင်နိုင် THE Contact Form SO ပေါ်တွင်သင်၏အီးမေးသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ပါ!
မူပိုင်ခွင့် © 2021 Ningbo Staxx Material Handling Equipment Co.,Ltd All Rights Reserved.